Offgbọ ala eletrik eletrik ọhụrụ A6-R nwere 700 * 35C taya | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa kacha mma igwe eletrik Offgbọ ala eletrik eletrik ọhụrụ A6-R nwere 700 * 35C taya
N'ibido ọnọdụ: PAS ma tụfuo
Product Details pụrụ n'ụzọ eletriki igwe eletriki
Shuangye kwalite ọgbara ọhụrụ kachasị mma n'okporo ụzọ eletrik eletrik ị kwesịrị ịmụ banyere:
Nke mbụ bụ okporo ụzọ igwe eletriki na-apụ apụ. N'ozuzu ya dị ogologo. Tụnyere nke gara aga etiti,
na kwalite ozu ogologo bụ ihe na akara na ndị dị elu nke ndị mmadụ na
Europe na America, na ịnya ụgbọ ga-abụ ihe ọma.
Nke abụọ bụ nwelite nke batrị n'ime na-aga n'okporo igwe eletrik igwe etiti. The
batrị batrị ga - ejikọ ya na tube na - enweghị mmiri, nke na - edozi ya
nsogbu nke mmebi batrị nke igwe kwụ otu ebe kpatara na-abanye mmiri. A ga-enwe oghere zoro ezo n'ihu ụgbọ ala ahụ, nke ga-esi na ya ngwa ngwa wepụ batrị ahụ.
Nke atọ bụ na-aga n'okporo igwe eletrik igwetaya. Taya ga - eji 700 * 35C kwụsie ike, nke nwere ike iburu karịa
ibu, ma dozie nsogbu nke igwe kwụ otu ebe nke dị mfe mgbapu
n’ihi na taya ahụ dị gịrịgịrị.
Nke anọ bụ na ihe niilena-aga n'okporo igwe eletrik igwe adopts a waterproof ngwa-ngwa-ntọhapụ circuit, nke na-aghọ mfe na-eme n'ọdịnihu na-arụzi.
na-aga n'okporo igwe eletrik igwe moto
36V 250W / 350W hub brushless moto, kachasị ọsọ site na 25 ruo 30KM / H. N'azụ moto na-enyekwu ike na arụmọrụ ka mma. Igwe eletriki igwe eletriki na-eji igwe eletriki azu, nke di nchebe ma di nma karie uzo ozo. The
80% mgbanwe ntụgharị moto nwere ike ịgbanwe ike eletrik n'ụzọ dị irè
n'ime ike iji nye ike maka igwe eletrik. Ihe bara uru karị bụ mkpọtụ ya dị ntakịrị, dịka 60 dB, na-enye ahụmịhe ịnya ụgbọ ala na nke dị obere.
batrị eletrik igwe eletrik
Batrị lithium 36V 8AH / 10AH anaghị egbochi mmiri, dị 40-60KM na ụgwọ, yana oge ụgwọ 4-6 awa oge. Batrị ahụ nwere nkọwa abụọ, ma enwere ụkpụrụ ikike dị iche iche dịka batrị dị iche iche si dị. One
bụ nkịtị ọkọlọtọ 36V 8AH ikike batrị, na nke ọzọ bụ
kwalite ụdị 36V 10AH (LG batrị batrị) ikike batrị. Ọ bụrụ n’inwere ihe ndị ọzọ achọrọ maka ihe agbara, mgbe ahụ 36V 10AH nwere ike bụrụ nhọrọ kacha mma. Anyị cruising nso / ụgwọ nwere ike iru 40-60 kilomita.
na-aga n'okporo igwe eletrik igwe LCD ngosi
na-aga n'okporo igwe eletrik igwe eriri mmiri na ngwa ngwa ntọhapụ
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na anyị Offgbọ ala eletrik eletrik ọhụrụ A6-R nwere 700 * 35C taya , biko hapụ ozi gị n'okpuru, anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike. Ma ọ bụ ị nwere ike ịga na nke anyị ukara website: www.zhsydz.com
Tags:eletrik igwe eletrik na-aga n'okporo igwe eletrik igwe eletrik na igwe kwụ otu ebe ụzọ kasị mma n'okporo ụzọ igwe eletriki igwe
Mbụ: 27.5 ″ n'etiti ụgbọala ebike 350w bafang moto A6AH26MD
Next: igwe eletriki igwe kwụ otu ebe ruru unyi 26 ″*4.0 taya taya 48V 500W 750W D1